Aquamarine - ubuhle ekhexisayo umbala nokujula. Sihlanganisa shades of sky-blue umbala ogqamile oluhlaza. Okungcono kakhulu, kufana wave ulwandle. Lihunyushwe kwelesiHeberu elithi Latin "aqua" - amanzi, futhi "mare" - kolwandle. Aquamarine, okuyinto enchants futhi captivates, uthatha igama layo kusukela itshe.
Celadon kuwumthwalo ngokomzwelo omuhle. Ngakho, ngo-ukucatshangelwa eside umbala, noma uhlale egumbini aquamarine, indoda normalizes blood pressure, kwehle izinga lokushaya kwenhliziyo, ukuphefumula siyehla, futhi kukhona ukuphumula ngokomzimba nangokwengqondo. Njengoba ubona, aquamarine kungenziwa ngokuthi umbala ephelele abaqhuba Ukuzindla. Ngaphezu kwalokho, kuye kwaba nomphumela omuhle ohlelweni womuntu sezinzwa, iletha kuye. Lokhu umbala uyakwazi ukwehlisa ubuhlungu.
By yokugqoka umbala aqua ukhethe ukuthi umbala? izingubo Aquamarine kudingeka bakwazi ukuhlanganisa kahle eminye imibala. Aquamarine uyalandisa imibala abandayo, kodwa egqamile futhi kubonakala ngokushesha. Ngakho-ke, ukuhlola nale umbala kungaba noma iyiphi intombazane ibukeka.
Aquamarine - umbala ukuphumula, ngakho kungcono kakhulu esetshenziswa ehlobo izingubo. Yena uyakuba mkhulu futhi kuqabule ngesikhathi esifanayo sobala ngenxa ulimi lwawo luhluke nokukhanya. Ubucwebe ukuba umbala izingubo kungcono ukukhetha cool pink and orange amathoni futhi ivumelane kakhulu ukubukeka izesekeli igolide umbala, isiliva coral. Amaparele ukunikeza kuphela yinkimbinkimbi ubukhazikhazi ukuze isithombe sakho.
Ukukhetha izingubo zalowo mbala, wazi ukuthi kufanele uthathe khulula njengoba aquamarine - umbala, ngokuhlanganisa lightness kanye airiness. A kwalokho enhle kuzoba oluhlaza, ensundu, nesiliva, negolide, blue, oluhlaza okwesibhakabhaka, pink, yellow, zethusi amathoni beige. Ngendlela Ungeqisi it ne anemibala okwesibhakabhaka, bese uzama ukudlala ku ukuqhathanisa.
Aquamarine - umbala elihle umhlobiso lamakamelo okulala, amakamelo kanye lounges ophilayo, njengoba ihambisana ngomqondo ngokwengqondo okuphumuzayo futhi omuhle. I engavamile walesi umbala wukuthi kuye ukukhanya, ngokwezwi nezwi leli gama udlala tones ezahlukene kanye semitones - kusukela blue and blue ogqamile futhi grey. Ngakho emini egumbini izovela okwesibhakabhaka kanye oluluhlaza, kodwa ukukhanya Lama kagesi kuba ogqamile.
Kulesi Igumbi kungcono ukuhlela ifenisha ezenziwe ngokhuni. Njengoba egumbini Decor ingasetshenziswa izitshalo zasendlini, kanye hhayi bayakhohlwa aquarium nenhlanzi njengoba ulwandle element - kubuye aquamarine.
Isithombe umbala uvezwa, kahle kahle for the yokugezela. Akuphoqelekile walala ngokugcwele amathayili kule umbala, kwanele ukuba izesekeli aquamarine imibala. Kungaba ijazana lasebusuku, amathawula, itafula, amakhethini kanye nokunye. Khumbula, uma unempahla amnyama, lokhu umbala kuyoba ekahle. Inhlanganisela aquamarine elimhlophe ukwakha ngaphezulu umoya abandayo futhi fresh namaphakathi nezwe.
Izithombe Wedding noma udinga Kungakhathaliseki emshadweni isithombe sesibili?
Ikhoma hypoglycemic: ukunakekelwa okuphuthumayo. Ungasiza kanjani? Ukufika udokotela?
The main uhlu imikhiqizo yobisi kanye nokusetshenziswa yabo
Temdzabu. temdzabu Izinhlobo
Ifa autosomal evelele. Izinhlobo ifa zezici e abantu